Suuqa: Saxiixyadii La Dhammeystiray Xalay Oo Kooban – Garsoore Sports
Suuqa: Saxiixyadii La…
Suuqa: Saxiixyadii La Dhammeystiray Xalay Oo Kooban
Suuqa kala-iibsiga cayaartooyda bisha Janaayo ayaa si rasmi ah u xirmay xalay Saqdii-dhexe, shalay waxay ahayd maalinta ugu dambeysa suuqa waxaana ay kooxuhu qaar dhammeystireen saxiixyada cayaaryahanno inkastoo aysan dhaqdhaqaaq sidaa u weyn suuqa aysan ka sameynin.
Haddaba kaddib xiritaanka suuqa kala-iibsiga cayaartooyda kooxaha qaar ayaa xilli dambe ku dhawaaqay saxiixyada cayaaryahanno.
Waxaan idiin soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee daqiiqadihii ugu dambeeyay suuqa bisha Janaayo.
Kaddib dhaawacyada Virgil van Dijk iyo Joel Matip ayaa la arkay Liverpool oo u dhaqaaqaysa sidii ay u xoojin lahayd daafaceeda maalintii ugu dambaysay suuqa kala iibsiga iyagoo Ben Davies heshiis joogto ah ugala soo wareegay Preston sidoo kalena Ozan Kabak heshiis amaah ah uga soo qaatay Schalke ilaa dhamaadka xilli cayaareedkan.
Saddex dhaqdhaqaaq oo kale ayaa lagu dhawaaqay isla saacadii ugu dambeysay suuqa, kaddib markii la xareeyay waraaqaha heshiisyada kala-wareegga cayaartooyda kahor waqtiga kama dambaysta ah.
Weeraryahanka Liverpool Takumi Minamino ayaa amaah ugu soo biiray kooxda Southampton ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan, iyadoo tababaraha Saints Ralph Hasenhuttl uu u sheegay websiteka kooxda “26 jirkaan wuxuu gacan ka geysan doono bixinta weerar kale oo tayo sarraysa, waana muhiim inuu yahay cayaaryahanka saxda ah ee aan heysano ” .
Cayaaryahanka heerka caalami ee dalka Japan ayaa beddel u noqonaya weeraeyahan Shane Long, halka imaatinka Irishman ee Bournemouth uu wadada u xaaray Josh King inuu ku biiro Everton. Schalke, oo lumisay Kabak, ayaa Shkodran Mustafi kala soo wareegtay Arsenal si joogto ah.
Kooxda ka cayaarta Bundesliga ayaa sheegtay in ku guuleystiii koobka adduunka uu saxiixay heshiis ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan.
West Brom ayaa dhammeystirtay heshiis amaah ah maalintii ugu dambeysay ee iyadoo lasoo saxiixatay xiddiga heerka caalami ee dalka England Ainsley Maitland-Niles oo ka yimid Arsenal iyo cayaaryahanka khadka dhexe ee dalka Turkiga Okay Yokuslu oo ka yimid Celta Vigo.
Kooxda kale ee halgamayaasha ah ee Fulham ayaa xoojisay dooqyadooda weeraryahan si ay u ugu sii negaato horyaalka, iyadoo heshiis amaah ah kula soo saxiixatay weeraryahanka Bordeaux Josh Maja inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Maja ayaa waqti ku soo qaatay kooxda Fulham kahor inta uusan u dhaqaaqin Sunderland sannadkii 2015 kaddibna Bordeaux afar sano kaddib.
Heshiiska 22 jirkan uu ugu soo laabtay Craven Cottage ayaa waxaa ku jira ikhtiyaari ah in heshiiska laga dhigo mid joogto ah.
Ma jirin wax cayaaryahan oo ay lasoo saxiixatay Man United, si ay usii xoojiso kooxdooda u tartamaysa hanashada horyaalka Premier League-ga, laakiin da ‘yarka Teden Mengi ayaa ka tagay kooxda isagoo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ku qaadan doona inuu ka hoos cayaaro Wayne Rooney oo leyliya kooxda Derby.
Galatasaray ayaa dhammeystirtay saxiixa daafaca Mareykanka DeAndre Yedlin oo ka yimid Newcastle, kaasoo heshiis amaah ah ay kula soo saxiixdeen.
Newcastle se waxay lasoo saxiixdeen cayaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Joe Willock ilaa iyo dhammaadka xilli cayaareedkan. Daafaca West Ham Winston Reid ayaa amaah ugu biiray Brentford ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
32 jirkaan reer New Zealand ayaa amaah ku qaatay qeybtii hore ee xilli-cayaareedka kooxda MLS ee Sporting Kansas City kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac halis ah oo jilibka ah oo soo gaaray bishii Maarso 2018.
Goolhayaha Tottenham Paulo Gazzaniga ayaa amaah ugu biiray Elche inta ka dhiman xilli-cayaareedka halka Troy Parrott uu aaday kooxda Ipswich.
Goolhaye kale, Jonas Lossl, ayaa ka tagay Everton si uu ugu laabto kooxda reer Denmark ee Midtjylland, oo ah kooxdiisii ​​ugu horreysay ee xirfadlenimo.
Ugu dambeyn ,Toffees ayaa markii dambe xaqiijiyay in daafaca middig ee da’da yar, Jonjoe Kenny uu amaah ugu biirayo Celtic ilaa dhamaadka ololahan.
Rasmi: Schalke 04 Oo La Saxiixatay Shkodran Mustafi
‘WAALI-CAS’ – Casaankii Luiz Ee Kulankii Xalay Oo Dhaliyay Dood Addag